बाहुबलीको रिलिज डेट नजिकिदै गर्दा कटप्पा परे लफडामा ; माग्नु पर्यो माफी | Jukson
बाहुबलीको रिलिज डेट नजिकिदै गर्दा कटप्पा परे लफडामा ; माग्नु पर्यो माफी
एसएस राजमौली निर्देशित बहुप्रतिक्षित फिल्म बाहुबलीको सर्वाधिक कौतुहलताले भरिएको पात्र हुन्, कटप्पा । फिल्मको पहिलो भागमा कटप्पाको कृत्यसँगै फिल्मले एउटा प्रश्न छाडेर जान्छ, आखिर किन कटप्पले बाहुबलीको हत्या गर्‍यो ?
यसको जबाफ बाहुबली द कन्क्ल्युजनमा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ, जो आगमी हप्ता सार्वजनिक हुँदैछ । र, फिल्म प्रदर्शनको मिति नजिकिदै गर्दा कटप्पा उर्फ सत्याराज भने लफडामा परे । यो विवाद तात्तातो घटनाबट उब्जिएको भने होइन, ८ बर्ष पुरानो हो ।
आठ बर्षअघि कावरी विवादमा आफुले दिएको बयानका कारण अभिनेता सत्यराज लफडामा परेका हुन् । उनले कर्नाटक-तमिलनाडुबीच पानी बाढ्ने कुरामा कन्नडका समर्थक कार्यक्रताको विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी गरेका थिए ।
यहि विवाद अहिले पुन बल्झिएपछि कटप्पा अर्थात सत्यराजले माफी शीर निहुराउनुपरेको छ । उक्त विवादलाई लिएर कतिपय स्थानका बाहुबलीको प्रदर्शनलाई समेत बाधा पर्ने स्थिती देखिएको थियो । त्यसैले हुनसक्छ उनले माफी माग्नमै आफ्नो भलाई देखे । सत्यारजले माफी माग्दै भनेका छन्, म कर्नाटकका मानिसको भावनालाई चोट पुर्‍याउनेबारे सोच्नपनि सक्दिन ।
यस मुद्दामा मैले नौ महिनाअघि किन टिप्पणी गरेको थिएँ भने, ‘त्यसबेला कर्नाटकमा तमिलमाथि हमाला भइरहेको थियो । म कर्नाटकको मानिसको भावनामाथि चोट पुगेकोमा माफी माग्न चाहन्छु ।’
आफ्नो कारणले फिल्म बाहुबलीलाई समेत असर पर्ने देखिएकोमा निर्देशक एसएस राजमौलीसँग समेत माफी माग्ने उनले बताएका छन् । राजमौली बाहुबलीका निर्देशक हुन् साथसाथै तेलुगू फिल्मको चल्तापूर्जा निर्देशक र स्त्रिmप्ट राइटर पनि ।
सत्यराजले भनेका छन्, ‘मैले फिल्म निर्मातासँग पनि भनेको छु कि, यदि मेरो कारणले तपाईहरुलाई कुनै हानी हुन्छ भने मलाई फिल्ममा नलिए हुन्छ ।’ – एजेन्सी
सारा अली खान ‘ठग्स..’ बाट रिजेक्ट
चलचित्र ‘पर्व’ को ट्रेलर सार्वजनिक
वीरगन्ज नाका हुँदै महिला, बालबालिका विदेशिने क्रम बढ्दो
मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तालाई खुवाउन रक्सौलमा सञ्चालन गरिएको निःशुल्क मेस बन्द
जी सिने अवार्ड नेपालमा आयोजना हुने, नेपाली चलचित्रलाई पनि अवार्ड !
सुपरस्टार एनटिआरको 'तेलेगु' फिल्मको ट्रेलर रिलिज (भिडियोसहित)
पोखरामा खुल्यो ‘मिनिसो’को शोरुम Miniso Nepal